Mobile Legends: Bang Bang ၏ ပထမဆုံးသော ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံပွဲ (M1) ၊ ၂၀၁၉ | Mizzima Myanmar News and Insight
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ရက် မှ ၁ရရက် နေ့အထိ Mobile Legends: Bang Bang ၏ပထမဆုံးသော ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံပွဲကို မလေးရှားနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးက M1 လို့သိကြတဲ့ ပထမဆုံး Mobile Legends: Bang Bang ရဲ့ ကမ္ဘာအနှံ့ပြိုင်ပွဲတွင် နယ်ပယ်ဒေသ ၁၄နေရာမှ အဖွဲ့ ၁၆ဖွဲ့က ကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅၀,၀၀၀ ကိုရယူကြမှာဖြစ်ပါသည်။ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မြို့တော် ကွာလာလမ်ပူ၊ ဘူကစ်ဂျာလီမြို့ရှိ Axiata Arena အားကစားကွင်းမှာ ပြုလုပ်သွားမယ့် ပြိုင်ပွဲလှုပ်ရှားမှုများကို Youtube Gaming ကနေ live-streaming ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Mobile Legends: Bang Bang ရဲ့ ကစားသမားအစစ်တွေကတော့ လက်တွေ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို သိရှိပြီးရင်ဖိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အတွေ့အကြုံကို ခံစားနိုင်ဖို့ ကြည့်ရှုနိုင်ရန်နေရာရယူထားရမယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်။
ဘာတွေထပ်ရှိသေးလဲဆိုတော့ eSports ကဒီနှစ်ရဲ့ Southeast Asian (SEA) Games တွင် နိုဝင်ဘာလ ၃ဝရက်နေ့ကနေ ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့အထိ ပထမဆုံးပွဲဦးထွက်ကို ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး Mobile Legends က eSports အမျိုးအစားတွင် ရွှေတံဆိပ်ရရှိအောင် ကူညီအားဖြည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှတွင် အကောင်းဆုံး Mobile Legends: Bang Bang အသင်းတွေထဲက နိုင်ငံကိုယ်စားပြုအသင်း ၉သင်းက ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲ live streaming ကို ဒီဇင်ဘာလ ၅ရက်နေ့၊ ရရက်နေ့၊ ၈ရက်နေ့ များတွင် Mobile Legends: Bang Bang Facebook page မှာ ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
"250FFM1” ကနေဝယ်ယူပြီး ၂၅% လျော့စျေးကို ရယူလို့ရနေပါပြီ။
MOONTON ကုမ္မဏီသည်၂၀၁၄ခုနှစ် Shanghai, China တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုဆိုလျှင် တရုတ်၊ တူရကီ၊ ရုရှား၊ အမေရိကန်၊ ကာဇက်စတန်၊ မြန်မာ၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုရှား နှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံတို့တွင် ဝန်ထမ်းပေါင်း ၃ဝဝကျော်ရှိပါသည်။ MOONTON သည် global mobile game စျေးကွက်ကိုဗဟိုပြုအာရုံစိုက်၍ ဂိမ်းများကို MOONTON မှပဲ ပိုမိုတိုးတတ်ရေးအောင်ပြုလုပ်ရင်း ထုတ်လုပ်လေ့ရှိပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အရှိန်အဟုန်မြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုမြန်သော ကုမ္မဏီတွေထဲမှ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး MOONTON ကုမ္မဏီဟာ တရုတ်ကစားသမားများအပြင် တခြားနိုင်ငံရှိ ကစားသမားအများဆုံး ကစားသော ကုမ္မဏီအဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ နံပါတ်တစ် မှာရှိနေပါသည်။ Mobile Legends: Bang Bang ကတော့ အခုလက်ရှိတွင် ရေပန်းစားလူကြိုက်များနေသော game ဖြစ်နေပြီး Multi-players Online Battle Arena (MOBA) တွင် ဦးဆောင်နေသော ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Mobile Legends: Bang Bang ဂိမ်းသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင်သာမက တခြားနိုင်ငံများတွင်လဲ Multi-player Online Battle Arena (MOBA) ဂိမ်းနယ်ပယ်တွင် အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်ပါသည်။ လူသန်း ၅၀၀ ကျော် install လုပ်ထားပြီး ကစားသူပေါင်း ၇၅သန်းကျော် ရှိပါသည်။ တိုးတတ်မှုမြန်ဆန်သောကြောင့် နိုင်ငံပေါင်း ၈ဝကျော်တွင် ဝင်ငွေအများဆုံး ထိပ်ဆုံး (၁၀) ခု စာရင်းထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်းအနေဖြင့် Mobile Legends: Bang Bang က ၁၃၉ နိုင်ငံကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဘာသာစကား ၂၅ ခုဖြင့် ဘာသာပြန်ထုတ်လုပ်ထားပြီး ၁,၂၀၀ ကျော် servers ကို စီမံခန့်ခွဲ၍ ဂိမ်းကို ကောင်းမွန်ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။
The First Ever Mobile Legends: Bang Bang World Championship 2019 (M1)
On 15th to 17th of November 2019, Malaysia will be home to the first Mobile Legends: Bang Bang world championship. Better known as M1, the premier Mobile Legends: Bang Bang global competition will feature 16 teams from 14 regions across the world battling it out foraprize pool of whopping USD $250,000. All the action will be livestreamed on Youtube Gaming from battleground–Axiata Arena, Bukit Jalil in Kuala Lumpur. However, true Mobile Legends: Bang Bang fans will know to getaspot for the real life action and taste of the electrifying experience.
M1 is the proud result ofaclose collaboration between MOONTON and its main sponsor, U Mobile. Inarecent statement by MOONTON CEO and co-founder Justin Yuan, he highlighted: “U Mobile,amulti-award winning Malaysian telco, has expanded its ongoing relationship with MOONTON by becoming the official sponsor of M1 World Championship. U Mobile's partnership with MOONTON and participation in M1 is in line with the telco's commitment to bring the best gaming experience to Malaysians and to provideaglobal stage for local eSports teams.”
Fans and enthusiasts alike need not wait longer. Three-day passes and one-day passes are already available, bundled with must-have goodie bags and entry into the M1 massive lucky draws. Throughout the championships,aslew of lucky individuals will win big with motorbikes, smart phones, gaming chairs, headsets, the M1 pack and more. Moreover, there will be opportunities to participate in the KOL Showmatch, entrance into the Experience Zone, as well as entry to the coveted Miya figurine sales.
The first ever Mobile Legends: Bang Bang world championship is happening in Malaysia. Will you be there to witness the beginning? Save yourselfaspot now at http://bit.ly/M1-Tickets or find out more at http://m1.mobilelegends.com. You could get 25% discount on the tickets by using “25OFFM1”.
For further enquiries, contact the official marketing agency, Jumix Sdn Bhd at:
Mobile Legends Bang Bang (MLBB) ဂိမ်